မင်းခိုင် – ငလျင်ပုံပြင် | MoeMaKa Burmese News & Media
နှစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ လူဦးရေပျံနှံ့မှုတာတို့ဘာတို့က ဆင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ချီလီက (အဲဒီ့တုန်းက) လူဦးရေ ၁၇ သန်းကျော်ရှိပြီး ဟေတီက ဆယ်သန်းသာသာပဲ ရှိပါတယ်။ ချီလီက နှစ်ဆနီးပါးပိုများတယ်ပေါ့။ မိတ်ဆွေ …. လူဦးရေကလည်း ပိုများ၊ ပြင်းအားကလည်း အဆ ၅၀၀ ကျော် ပိုပြင်းတဲ့ ချီလီငလျင်ရဲ့ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုကို ဘယ်လောက်လို့ ခန့်မှန်းမိပါသလဲ။
ဟုတ်ကဲ့ … အဲဒီ့ပြင်းထန်တဲ့ ငလျင်ကြောင့် ချီလီတနိုင်ငံလုံးမှာ လူ ၅၃၅ ဦးသေးဆုံးခဲ့ပြီး ပျောက်ဆုံး ၂၅ ဦးပါ။ လူနေအဆောက်အအုံတွေလည်း ပျက်ဆီးတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဟေတီမှာ သမ္မတအိမ်တော်၊ လွတ်တော်တွေကအစ ပြိုကျပြီး မြို့တော်တခုလုံး ပြားပြားဝပ်ဝပ်သွားချိန်မှာ ချီလီရဲ့ ပျက်ဆီးမှုက ၉% ပဲ ရှိပါသတဲ့။
ဘာတွေကွာကုန်တာလဲ … ဘာတွေ ကွာကုန်တာလဲ .. ။
နောက်နှစ် (၂၀၁၁) မတ်လရောက်တော့ ချီလီထက်ပြင်းတဲ့ ငလျင်ကြီးတခု ဂျပန်ကမ်းခြေ တိုးဟိုခု Tohoku မှာ ထပ်လှုပ်ပြန်တယ်။ ပြင်းအား ၉.၀ ထိရှိတဲ့ ငလျင်ကြီး၊ ကမ္ဘာရဲ့ စတုတ္ထမြောက်ပြင်းအားကြီးဆုံး ငလျင်ကြီးပါ။ သိတဲ့အတိုင်းပဲ ဂျပန်ဆိုတာ လူဦးရေ အရမ်းထူထပ်တဲ့ ကျွန်းနိုင်ငံ၊ မိုးမျှော်အဆောက်အဦးတွေ ပြည့်နှက်နေတဲ့ နိုင်ငံ။ အဲလိုနိုင်ငံမျိုးမှာ ပြင်းထန်လှတဲ့ငလျင်ကြီး (ချီလီထက် အဆ ၁၀၀၀ ပိုပြင်းတဲ့ ငလျင်ကြီး) လှုပ်လိုက်တော့ အပျက်အဆီးက ဘယ်နည်းလိမ့်မလဲ။ အဆောက်အအုံပေါင်း တစ်သိန်းကျော် လုံးဝပျက်ဆီးခဲ့ပြီး တ၀က်ကျော် ပြိုပျက်သွားတဲ့ အဆောက်အဦးက သုံးသိန်းနီးပါးနီးပါးရှိတယ်။ အနုမြူဓာတ်ပေါင်းဖို သုံးဖိုပျက်စီးခဲ့ရတယ်။
အရေးကြီးဆုံး လူသေဆုံးမှုကရော … ဟုတ်ကဲ့ … ၂ သောင်းနီးပါးရှိပါတယ်။
အစိုးရရဲ့ ဘုန်းတန်ခိုးကို စိန်ခေါ်တာမဟုတ် … အစိုးရရဲ့ လုပ်ကိုင်စွမ်းရည် capacity ကို စိန်ခေါ်တာ .. ။
ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ ကုသိုလ်ကံတရားကို စိန်ခေါ်တာမဟုတ် …. ပြည်သူတွေရဲ့ နှလုံးသားကြံခိုင်မှုနဲ့ ဦးနှောက်ကြံခိုင်မှုကို စိန်ခေါ်တာ … ။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:မင်းခိုင်, ခေတ်ပြိုင်အတွေ့အကြုံ